Ogaden News Agency (ONA) – Shirki Hawlwadeenka JWXO isugu yimaden Frankfurt iyo xiisahi u laha oo ka wareysany xubno goob joog ahaa+ filimaan
Shirki Hawlwadeenka JWXO isugu yimaden Frankfurt iyo xiisahi u laha oo ka wareysany xubno goob joog ahaa+ filimaan
Posted by ONA Admin	/ January 8, 2013
Shirki howlwadeenka Jabhadu isugu tageen wadanka Germany ayaa ahaa shir taarikhi ah oo kuwo lamid ah ay kasocdaan Wadanka Mareykanka iyo Koonfur Afrika. Hadaba waxyaalaha xiisaha badan ee kulankaas ka dhacay Magaalada weyn ee Frankfurt ayaa waxaa noo suurto gashay inaan wareysiyo ka qaadno xubno ka qeyb galay kulankaas oo fikradahooga noo cabiray iyo waxii ay kasoo dhaxleen isku imaanshahaas.
Halgamaa kamid ah mudanayaashi kasoo qeyb galay ayaa shirkan ku tilmaamay innuu ahaa mid lamida kulamada waaweyn ee xisbiyada siyaasi ee ree galbeedku ay qabtaan waana guul iyo horumar ay Jabhada ONLF ka gaadhay dhinacaas. Waxaa uu halgamaagu noo sheegay in shirkan uusan aheyn kii u horeeyay ama u danbeeyay. Waxaa sanadkan kii ka horeeyay lagu qabtay kulan sidan u weyn oo lagaga arrinsanayay halganka lagu raadsanayo xoriyada Ogadeniya iyada oo fikrado badan lagu soo bandhigay oo xubnaha iyo taagerayasha jabhadu soo gudbiyeen. Sanadkana Waxaa kaadirka Jabhada ONLF ay soo bandhigeen fikrado cusub oo halganka hana qaadkiisa wax tar weyn u leh.
Jabhada ONLF ayaa caan ku ah inay shacabka somalida Ogadeniya ay hadiyo jeer la tashato islamarkaasna ay qiimeyso rabitaanka shacabka iyo fikradaha ay soo jeediyaan. Waxaa sanadkii lasoo dhaafay madaxda Jabhada ONLF ay kulamo ku qabteen 5 qaaradood ee adduunka oo qurba joogta somalida Ogadeniya fikradaha ay qabaan lagu aruurinayay islamarkaasna madaxda Jabhadu ay xog waran siinaysay maxuu kan uga duwanyahay shirarkaas ayaa weydiinay halgamaa kamid ah xubnihii tirada badnaa ee kasoo qeyb galay kulankan.
Halgamaaga ayaa noogu jawaabay in uu kaga gadisnaa kulamadaas hore kani dhowr arrimood. Marka kowaad waxaa si rasmi ah loo qiimeynayay halganka iyada oo la heystay qodobo laga doodayay oo ku beegna hanaansocoka jabhada ONLF islamarkaasna go’amo ayaa laga soo saarayay qodobadaas oo ku haboon. dhinaca kale waxaa si rasmi ah loo qiimeyay Haayadaha Jabhada iyo qaabaka ay u howlagalaan iyada oo fikrado badan laga dhiibtay qaab shaqeedka haayad kasta oo kamid ah jabhada lagana doodayay sidii loo xoojin lahaa shaqooyinka haayadaha Jabhadu ay fuliyaan. waxaa intaas oo dhan garab socday casharo ay soo diyaariyeen khubaro aqoon u leh shaqooyinka haayad kasta oo ka bixinayay tusaale iyo soo jeedin.
Kulankan ayaa mudadii uu socday waxa dadkii tirada badnaa ee kakalayimid wadamada Yurub ay kusugnaayeen goobo loogu talo galay marti sharafta oo ay ku caweysimayeen habeenkii islamar ahaantaasna ay ku lahaayeen aqoon isweydaarsi ay koox koox isula qaadanayeen maalinkiina waxaa laga doodayay qodobadi shirka.